Waxbarasho dadka waaweyn | Skolverket nyanlända
Barnaamijyada horudhaca ah
Machadka dadka waweyn
Jaamacad iyo machad jaamacadeed
Waxbarasho u khaas ah dadka waaweyn
Oo loogu tala galay dhalinyarada waaweyn
Waddooyin badan oo u furan dhalinyarada qaan gaarka ah
Haddii aad soo galooti ku tahay Iswiidhan waxaa kuu bannaan fursado badan oo uu ku siinaayo qaabka waxbarasho ee iskoollada Iswiidhan. Ilmaha da'doodu eey tahay illaa 15 sano waxaa saaran waajib ah ineey dhigtaan dugsiga hoose dhexe ee Iswiidhan. Laakiin siduu sameynayaa qofka isagoo da'diisu tahay 16 sano yimaada Iswiidhan isla markaana raba inuu dhameystir ku sameeyo waxbarashadiisa? Waxaa jira waddooyin waxbarasho oo badan oo dadka waaweyn loogu tala galay. Maamulka degmada ayaa qeyb ka qaadanaya qiimeynta aqoonta ardayga iyo khibraddiisa oo ku saleysan mas'uuliyaddiisa ku aaddan sii wadidda waxbarashada.
Waxa ugu muhiimsan sida loo helo shaqo iyo dhaxgalka bulshada iswiidhishka ah waa inuu qofku buuxsado maaddooyinka iyo koorsooyinka uusan heysanin si uu u helo shahaaddada dugsiyada hoose dhexe iyo sare. Waxeey fursad kuu siineysaa inaad shaqo ama waxbarasho xirfadeed heshid, waxeey kaloo ku siineysaa fursado ah inaad sii wadatid waxbarashada heerka jaamacadeed.
Baahidda weey kala duwan tahay waxaadna isku geynkartaa waxbarasho iyo koorsooyin kala duwan iyadoo laga duulayo baahida shaqsiga inta karaankiisa ah. Waxaa la sameynayaa qorshe waxbarasho oo gaar ahaaneed, taasoo heerkiisa koowaad noqoneyso barashada luqadda iswiidhishka ah iyadoo la dhiganaayo dugsiga sare qeybtiisa barashada luqadda ama iswiidhishka loogu tala galay ajnabiga (sfi). Taasi waxaa la barbar ah qaabab iskool oo loogu tala galay in shaqo lagu helo iyo in waxbarashada la sii wato. Guud ahaan kulligood waa lacag la'aan.
Iskoollada iyo degmooyinka waxeey leeyihiin jiheeye xagga waxbarashada iyo xirfadaha ah oo dhiiba warbixin ku saabsan waxbarashada iyo shaqooyinka suuqa.